Momba ny tantarantsika
Hatramin'ny nananganana ny orinasa, ny orinasa dia nivezivezy nandritra ny 12 taona dia niankina tamin'ny ekipa avo lenta, fitaovana tsara, fitantanana tonga lafatra hanondrana ireo vokatra miloko kitay stainless amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao isika, anisan'izany ny Azia, Afrika , Moyen Orient, Amerika atsimo a ...
Inona no ho tsapanao rehefa manana milentika avo lenta ianao?
Manao fisakafoanana fatratra, sakafo antoandro voaomana tsara na fisakafoanana mahafinaritra amin'ny tenanao, miara-mipetraka amin'ny fianakavianao sy ny namanao ary miresaka aminy, ny fiainana dia voarindra amin'ny sehatra toy izany, izay mahatonga ny olona hankafy azy. Ao amin'ny sehatry ny lakozia mafana toy izany, ny filentehana milentika nefa somary marefo dia tsy maintsy atao indispe ...
Tamin'ny fiandohan'ny taom-baovao tamin'ny taona 2020, dia nisy otrikaretina corona vaovao nitarika ny valanaretina pnemonia, izay nihanaka tamin'ny hafainganam-pandeha nahagaga, ary niparitaka haingana tany Wuhan ho any amin'ny firenena iray manontolo. Nandritra ny fotoana kelikely, tao anatin'ny vonjy maika ny Faritany Wuhan sy ny Hubei! Natomboka ny ady fanoherana ny valanaretina ...